Momba anay - JiangXi KONA Industrial Co., Ltd.
KONA toy ny orinasa mampifangaro teknolojia fanamboarana.
Manangona vola be amin'ny R&D avy eo ary mamorona andiana milina hook ho azy sy teknolojia manokana ho an'ny famokarana hook, mifototra amin'ny fakana ny teknolojia sy ny traikefa avy any Japon sy Eropa.
Miorina amin'ny hevitra fa ny fizotrany rehetra misy antoka, ny farango rehetra misy toky, ny mpiasa tsirairay avy aminay dia mifantina tsara amin'ny fisafidianana fitaovana, fanodinana ary fametahana fitsaboana aorian'izay mba hanaovana ilay farango indostrialy ho faritan'ny asa-tanana.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao tena lehibe amin'ny R&D, azonay atao ny "manamboatra" karazan-trondro ho anao fatratra na manao ahoana na firy na firy ny sarotra, ary mahazaka fitakiana isan-karazany amin'ny fividiananao tokana.
"Ny kalitao voalohany, ny tahan'ny vidiny avo lenta, ny fandefasana haingana" dia ny fitsipika fitantanana izay tanterahinay hatrany, noho izany dia mino izahay fa afaka manampy anao hahazo ny fizarana tsena haingana sy hamita ny baikon'ny mpanjifa ara-potoana.
Amin'izao fotoana izao, ny fananganana dingana voalohany an'i KONA dia mahatratra 30 acers, miaraka amin'ny atrikasa 15000㎡, ny fananganana ambaratonga faharoa antsika dia mirefy 60 hektara miaraka amin'ny atrikasa 25000㎡ eo ho eo. Manana teknisiana manokana 20+ izahay, mpiasa mahay 200 mahery , Fitaovana 900 + manokana.
Mino mafy izahay ary hanaraka ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny "Super mahery, Super maranitra ary Super penetrative", miara-miasa mba hiroso amin'ny tanjona kendrena tsara amin'ny fiheverana miabo tsara sy be fanantenana, toy ny teny filamatra hoe "Aza manomboka mifarana, Aza mijanona hatomboka".